2017 May 04 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
DEG-DEG+AKHRISO:- Kulan Xasaasi Ah Oo Haatan Muqdisho Uga Socda Gudoomiye Taabid Iyo Xildhibaanada Beesha Mudullood, Maxaa Looga Hadlayaa??
MUQDISHO(P-TIMES)-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed iyo Xildhibaanada Beesha Mudullood u matala Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa caawa uu shir uga socdaa magaalada Muqdisho. Shirkan oo ah mid ay albaabada u xiran yihiin ayaa ka socda Hotelka Global, waxaana gogosha dhigtay Xildhibaanad Drs Mina Xasan Shibis. Kulankan ayaa ah kii u […]
SAWIRRO:- Madaxweynaha Hirshabeelle Cosoble Iyo Ku Xigeenkiisa Oo Dib Uga Laabtay Jowhar, Kana Hadlay Doorashadii Galmudug
JOWHAR(P-TIMES)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhar kadib markii toddobaaydadii la soo dhaafay uu ku sugnaa magaalada Muqdisho. Madaxweyne Cosoble iyo Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeele Cali Cabdulaahi Xuseen ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhoweeyay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeele Shiikh Cismaan Barre iyo labadiisa ku xigeen iyo […]
DEG DEG+AKHRISO: Turkiga oo mashaariic waa weyn ka hirgalinaysa G Mudug & Madaxweyne Gaas oo maanta qaabilay
GAALKACYO(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ku qaabilay magaalada Gaalkacyo, wafdi ka socda dawladda Turkiga oo ay horey iskugu soo arkeen magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa wafdigan waxay u sheegeen in ay ka fulin doonaan Puntland, gaar ahaana magaalada Gaalkacyo sadex mashruuc oo waa weyn, kuwaas oo kala ah. […]
AKHRIS XASAASI AH: Maxaad ka taqaanay Taariikhda Marxuum Cabaas Siraaji & Taariikhda Asalkiisa hoose oo ah mid xasaasi ah
Allaha ha u naxariistee waxaa toogasho lagu diley wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta federaalka, ahaana xildhibaan baarlamaanka federaalka Mudane Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaje, haddana qormadani waxaan ku eegayaa sooyaalka qoyska marxuumka. Cabaas waxa uu kasoo jeedaa qoys culumo ah fac ka fac, waxaana si weyn loo garanayaa awoowgiis Sheekh Siraaje Aw Aadan oo ahaa caalim […]
XOG DEG DEG AH: Madaxda DF oo la kulmay Hanti Dhawraha guud ee Dalka oo ay ilaaladiisu dishey wasiirkii Howlaha guud & Guryeynta DF.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxda ugu sareysa dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa goor dhaw la kulmay Hanti dhawraha guud ee dawladda Soomaaliya oo ay kala hadleen arrimaha dilkii wasiirkii howlaha guud & Guryeynta ee dawladda Faderaalka oo ay xalay dileen Ilaaladiisu. Guddiga baarista howshan loo xilsaaray ayaa kamid ah xubnaha ka qeybgalay wada hadaladan, waxaana diiradda lagu […]
WAR DEG DEG AH: M/weyne Farmaajo oo soo gaaray Muqdisho, shir deg deg ahna iskugu yeeray Laamaha Amniga
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku joogay dalka Itoobiya ayaa si deg deg ah u soo gaabiyey, wuxuuna soo gaaray magaalada Muqdisho. Shir khaas ah ayuu hadda la leeyahay Guddiga Amniga Qaranka oo ay ku jiraan Jeneraalada hogaamiya ciidamada dawladda iyo Guddoonka Maxkamadda ciidamada Qalabka sidda. Shirkan waa mid albaabadu […]
UPDATE: Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo la wareegtay Askartii dishay Wasiirka & Xiisad taagan
GAROOWE(P-TIMES) – Maxkamadda ciidamada Qalabka sidda ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegta labo askari oo ridey xabadihii xalay lagu dilay Wasiirkii howlaha guud & Guryeynta ee dawladda Faderaalka Soomaaliya. Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday in ay askartan hadda gacanta ku hayso Maxkamadda ciidamadu, dhawaan ay u fariisan doonto dacwadooda. Madaxda dawladda Soomaaliya ayaa amray […]
DHAGEYSI XASAASI AH: Puntland oo war ka soo saartay howlgalada ciidan ee ka socda mandiqada iyo Amniga guud
GAROOWE(P-TIMES)- Wasiirka Amniga ee dawladda Puntland Cabdi Xirsi Jarqab ayaa si faahfaahsan uga hadlay howlgalada ciidamada dawladda ee kusugan xaaladda sugida Amniga. Wasiirka ayaa sheegay in ay howlgaladan yihiin kuwa ay dawladdu xooga ku saarayso sidii ay amniga u xaqiijin lahayd. Mr, Qarjab ayaa ugu baaqay in ay Shacabku la shaqeeyaan ciidamada dawladda una sahlaan […]
XOG MUHIIM AH: Howlgal adag oo xalay ka dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo, Maxaase lagu soo qabtay?
GAALKACYO(P-TIMES)- Howlgalo xasaasi ah oo lagula dagaalamayo kooxaha dilalka iyo qaraxyada qorsheysan kafuliya magaalada Gaalkacyo ayaa xalay bilowday, waxaana saqdii dhexe loo dhacay guryo waa weyn oo kuyaala magaaladaas. Howlgaladan ayaa ka dhacay gudaha magaalada, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey in la qabtay dadkaas la raadinayey qeyb ka mid ah, inkastoo ay wali socdaan howlgaladan. […]
DEG DEG: M/weynaha Koonfur Galbeed & Odayaal la socday oo si deg deg ah ku gaaray Muqdisho, waxaase maxay Ujeedadu?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawlad gobaleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay wehliyaan Odayaasha dhaqanka ee gobaladaas ayaa gaara goor dhaw magaalada Muqdisho. Ujeedada socdaalka ayaa la xariirta dilkii Wasiirka Howlaha guud & Guryeynta ee dawladda Soomaaliya oo ay dileen qaar kamid ah ciidamada dawladda Faderaalka. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ka tacsiyey geerida kutimid Marxuum […]